UCaza usibonisa ngomzekeliso wakhe "Usuku Lentshabalalo" | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Heavy Metal yi Imvelaphi yaseMelika emnandi yamabali ahlekisayo kwaye ubukhulu becala ibunjwe ngumxholo wabantu abadala apho unokufumana ubungqangi obumnyama, intsomi yesayensi kunye nenkanuko. Abazobi abagqwesileyo abanjengoEnki Bilal, uJean Giraud (owaziwa njengoMoebius), uPhilippe Druillet, uMilo Manara noPhilippe Caza badlulile kweli phephancwadi.
Kukugqibela oku kusibuyisela kula mabali ngalo mzekeliso ubizwa ngokuba "ngumhla wentshabalalo" apho sinokujonga khona ukugxeka okukhulu kunye nokuthelekisa Kweli hlabathi lanamhlanje elinokusikhokelela kulo ukuba kwehle intlekele engalindelekanga enjengaleyo inxulumene nenyukliya. Umzekeliso okhethekileyo apho sinokuya khona kwilizwe eliyilelwe umdlalo wevidiyo we-4 kunye nehlabathi eliwayo ngenxa yeemfuno zalo zezinto eziphathekayo.
Ukuzingela kusisa kwixesha langoku kunye nelangoku ezo zinto zichukumisayo zikhethekileyo kunye nesitayile esithile kwabanye oonobumba abangaqhelekanga, nangona bengohlukanga kangako kwinto esinokuyifumana namhlanje sithanda izinto eziphathekayo kunye nobungxowankulu.
Ukuzingela kutshabalalisa elo lizwe lipinki kunye neplastiki lisirhangqileyo yiguqule ibe yidreprepit, ngwevu Apho amadangatye empucuko atya amatye kunye nokuqina okushiyekileyo kwabanye abalinganiswa abaphantse babambelela kwakuloo silhouette ilangazelela ubushushu begesi yendalo kwigumbi labo lokuhlala.
Njengakwi-Heavy Metal, apho kukhutshwe khona ifilimu yodidi oluphezulu, Ukuzingela kubonisa amaxesha anamhlanje kunye nekamva elinokubakho ngala mandla makhulu athetha ukuba nobugcisa bokwenza umzekeliso ngesandla obunikwe yiminyaka yokusebenza kunye nobungcali ukusukela kwiminyaka yama-70s.
Olunye uhlobo lwe zimele.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Umzekeliso kaHunt "woMhla woMgwebo"